'बर्थडे' कै दिन गुगलमा देखिए यस्ता समस्या ! - Everest Dainik - News from Nepal
‘बर्थडे’ कै दिन गुगलमा देखिए यस्ता समस्या !
निःशुल्क इमेल सेवा जीमेलका नेपाली प्रयोगकर्ता समस्या सामना गरिरहेका छन्।
इन्टरनेट मल्टिनेशनल टेक्नोलोजी कम्पनी गुगलले २० औं जन्मोत्सव मनाइरहँदा बिहीबार उसैको इमेल सेवा जिमेलमा समस्या देखिएको हो । नेपाली इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर मार्फत् प्राप्त हुने इन्टनेटमा जीमेलमा समस्या देखिएको हो ।
बुधबार रातिदेखि यस्तो समस्या देखिएको नेपाली प्रयोगकर्ताले उल्लेख गरेका छन् ।
सुबिसु, भायानेट, क्यासिक टेकसहितका इन्टरनेट कम्पनीका ग्राहकले जिमेल, युट्युब, फोटो र म्याप ब्राउजिङमा समस्या देखिएको उल्लेख गरेका हुन्। भायानेटले आफ्ना ग्राहकहरुलाई सूचना दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय सर्भरमा समस्या आएको कारण गुगल अन्तर्गतका सेवामा समस्या आएको सूचना पठाएको छ।
याे पनि पढ्नुस Google employees are walking out over sexual harassment scandals
सुबिसुका प्राविधिक सहयोग कक्षमा सम्पर्क गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सर्भरमा समस्या कारण जिमेल र युट्युब सहित विभिन्न सेवामा समस्या देखिएको जानकारी दिइयो। ‘समस्या समाधान हुने वित्तिकै जानकारी गराउँछौं’, सुबिसुका एक प्राविधिकले भने, ‘यो हाम्रो बस बाहिरको समस्या हो।’
भारतको एयरटेलसँग ब्यान्डविथ किनेका इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडको सेवामा समस्या देखिएको हो। बिहीबार गुगलले आफ्नो २० औं जन्मदिन मनाइरहेको छ।
इन्टरनेट, सफ्टवेयर र हार्डवेयरमा काम गरिरहेको गुगलमा ८५ हजार कर्मचारी काम गर्छन् । गुगलले नेपालमा आफ्नो सेवाहरू प्रभावकारी बनाउन मुख्य इन्टरेट सर्भिस प्रोभाइडरसँग मिलेर काठमाडौंमा आफ्नै सर्भर राखेको छ । ती सर्भरहरूका कारण जीमेल, युट्युबसहित गुगल सेवा नेपालमा चुस्त रहँदै आएको छ।
भिडियो सेयरिङ साइट युट्युब, सर्च इन्जिन, जीमेल, गुगल म्यापजस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने सेवा सञ्चालन गरिरहेको गुगलले पछिल्लो समय अमेरिकी सेनाका लागि ड्रोन उत्पादनको काम गरिरहेको छ । एजेन्सीको सहयोगबाट